Madaxda Somaliya oo Shir uga Furmayo Maanta Turkiga iyo Puntland oo ka Cago Jiidaysa |
Madaxda Somaliya oo Shir uga Furmayo Maanta Turkiga iyo Puntland oo ka Cago Jiidaysa
Muqdisho (GNN) Madaxweynaha Somaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo wefdi uu hoggaaminaayo ayaa shalay u ambabaxay dalka Turkiga, halkaas oo uu Maanta ka furmayo shir looga hadlayo aayaha Soomaaliya isla markaana dhaqaale loogu ururinaayo doorashooyinka sanadkan 2016.
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ayaa waxa ka qaybgalaya dalal badan oo kamid ah kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya.
Ilaa hadda waxaa dalka Turkiga u duulay Wefdi uu hogaaaminaayo Raysalwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, iyo Madaxweynaha Jubaland, sidoo kale waxaa laga sugaaya Madaxweynayaasha maamulada kumeel-gaarka ah ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Dhanka kale Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas ayaa daboolka ka qaaday in shirka Turkiga uga furmaayo Soomaalida ay ka qaadan doonaan kaalintooda, balse haddii ay ka waayan maqaamkooda ay isaga soo bixi doonaan.
C/wali Gaas waxa uu sheegay in Puntland aysan ahmiyad u arag shirka ka furmaaya dalka Turkiga balse ay diideyso in caalamka ay ku dhaliilaan ka qeybgal la’aanta shirka ay ku mideysan yihiin Soomaalida.
Gaas waxa uu tilmaamay in arrimaha shirkaasi looga hadlaayo ay yihiin kaliya wixii looga hadlaayay shirarkii ka kala dhacay Muqdisho iyo Kismaayo, taasina ay tahay mid aan muujineynin isbedel muuqda.
Waxa uu cadeeyay in shir waliba oo loo qabto Somalia ay mar waliba Puntland taagan tahay mowqifkeeda, taasi oo uu ula jeedo in maamulkiisa uu kala sooci doono shirka iyo mowqifka ay ka taagan yihiin 4.5.
Madaxweyne Gaas waxa uu ku nuux-nuuxsaday inay ka go’an tahay in shirkaasi ay isaga soo baxaan haddii ay u muuqan weydo maslaxadooda.